Shina: Mpanapoaka baomba miteraka sahotaka sy fahatezerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Mey 2018 19:47 GMT
Tao Kunming, renivohitry ny faritanin'i Yunnan, fanapoahana baomba tamin'ny bus anankiroa no nitranga tao anatin'ny ora iray, nahatohinany tanàna ny marainan'ny 21 Jolay. Samy mitondra ny laharana faha-54 avokoa ireo bus roa ireo ary nitranga teo amin'ny arabe anankiray avokoa ny fipoahana, na dia tamin'ny 7:05 no nitranga ny voalohany ary tamin'ny 7:40 maraina kosa no nitranga ny faharoa. Amin'ny fitambarany roa no maty ary mihoatra ny 10 no naratra.
Ny vehivavy iray 35 taona maty teny an-toerana dia nolazaina fa an-dalana hody hankalaza ny tsingerintaonan'ny zanany.
Nanamafy ny polisy fa niniana natao ny toe-javatra fa tsy mbola tsy fantatra ny antony. Mety ho baomba voafahana mialoha hapoaka amin'ny fotoana voafaritra no nampiasaina tamin'izany araka ny hevitry ny polisy.
Tsy azo ihodivirana fa niteraka sahotaka teo amin'ny Shinoa ny fanafihana, tsy noho ny maha-antomotra ny lalao olaimpika ihany, fa manampy ireo andiana rotaka nitranga manerana firenena izany. Nanaovan'ny bilaogera Wang Xuguang tsoakevitra ny fahatapohana nentiny tamin'ny filazana hoe:
Hatraiza moa ny halavitry ny fampihorohoroana amintsika?
Hatramin'ny fipoahana tao Zhangjiajie, ny fifandohana tao Weng’an, famonoana polisy ao Shanghai, ary hatramin'ny voina roa vao haingana namonoan'ny polisy misahana rotaka ny tantsaha anankiroa, efa mihahenjakenjana ny hozatry ny Shinoa. Na izany aza, na dia eo ho eo ihany aza ny fahavononan'ny olona ara-tsaina, mbola tsy fahita ny fikoropahana tahaka izao izay ianjeran'ny aloky ny fahafatesana amin'ny olon-tsotra tsy manantsiny.
Tamin'ny fifandirana niely talohan'izao, rehefa nitodika tany amin'ireo manampahefana miangatra ny loha-lefona, dia manondro ny tenany ho “mpanakorontana” ny tontolon'ny bilaogy sy ny teny am-bava, fa nanindry ny daholobe ny ankamaroan'ireny. Eny fa na dia polisin'i Shanghai miisa enina aza no maty voatsatok'antsy, dia tsy vitsy ny olona no naka toerana sy nahasahy naneho fangorahana an'i Yang Jia ilay mpamono.
Na izany aza, nihodina loatra ny sain'ny olona satria ny tsy manantsiny sy ny tsy nampahafantarina no nivantanan'ny fanafihana.
Ny fanamelohana mafy indrindra ny fampihorohoroana mikendry ny olom-pirenena mahazatra.
Zazasary tahaka ny ahoana ny manapoaka baomba vahoaka!
Ary misy ireo mpiserasera nihevitra fa misy ny vondron'olona mendrika kokoa ny hanapoahana baomba.
Henatra ho an'ireo vendrana ireo! manampahefana be kolikoly no tokony nanapoahanareo baomba! Adala, fa inona no eritreretinareo mahatonga anareo hankahala ny ny sarambabembahoaka!
Niely ny tenim-pahatezerana:
Iny ny an'ireny hena am-bifotsy ireny, ilay manapoaka boamba ny tsy manantsiny ary mamela manampahefana maro, jiolahy maro dia maro ho ivelan'ny lasibatra.
Laza tsara raha nanapoaka baomba manampahefana voakolikoly, saingy biby ianao raha mamono ny sarambabem-bahoaka
Mbola tsy fantatra ny antsipirihany momba ny fipoahana, saingy hahazo tehaka ny valinteny haingana avy amin'ny polisy. Vonona haingana ny torohay taorian'ny zava-nitranga ary tsy nisy ny famerana ny antsafa ho an'ny mpanao gazety, ary tafiditra amin'izay ireo avy any Hong Kong.
Na dia izany aza, mbola mifono mistery ny antony sy ny tanjon'ny fipoahana. Ary ny fisian'ny olom-pirenena sasany nahazo hafatra lahatsoratra alohan'ny fanafihana niteraka fahamaroan'ny olona ahiahiana sy ny baraingo, ka nivondrona ny olona amin'ny aterineto nampiasa ny milim-pikarohana olona, miezaka ny hitady ny mpamono olona. Naneho hevitra ny mpiserasera fa hisy dikany indrindra amin'ny fampiasana mili-pikarohana olona ny fanentanana.
Nirohotra nankany amin'ireo Mpanafaka an'i Tibet ihany koa ny fironan'ny ahiahin'ny mpiady amin'ny fampihorohoroana.
Ho an'ireo mpampihorohoron'ny fanafahana an'i Tibet, fahaleovantenan'i Xingjiang ary ny fahaleovantena Hui, ankoatra ny fitsarana ilaina, tokony tifirina avy hatrany reo.
Tonga angamba ny fotoana fitroarana. Inona ary iza no homena tsiny?